कोरोना भाइरसको नियन्त्रण कहिले हुन्छ ? खोप बन्न एक वर्ष लाग्ने, मानिसलाई प्रतिरोधी बनाउन दुई वर्ष लाग्ने – Janata Times
काठमाडौँ, चैत १२ । अहिले धेरैको मनमा उठ्ने प्रश्न हो – यो भाइरसको नियन्त्रण कहिले हुन्छ ? स्पष्ट जवाफ कसैले दिन सकेको छैन ।
अहिले विश्वका ठूला सहरहरु सुनसान बनेका छन् । विद्यालय, अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालय तथा व्यवसायहरु पर्यटन क्षेत्र सुनसुन छ । सङ्क्रमित थपिने र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
सङ्क्रमणको दर कम भएमा प्रतिबन्धहरु केही खुकुलो पार्न सकिएपनि मानिसहरु लामो समय अलग्गिएर तथा सावधानीका उपायहरु अपनाएर बस्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका बीबीसीले जनाएको छ
बकर इदले नेपाली समाजमा आपसी सद्भाव र भ्रातृत्व अभिवृद्धि गर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारी बिश्वस्थ